50 Su'aalaha Inta Badan ee Waraysiga Laga Yiraahdo waad Waji Karta Wareysiyada | ITS
50 Su'aalaha Inta badan Caadiga ah ee aad la kulmi karto wareysiyada
50 Su'aalo Weydiinta Inta Badan
Iyadoo la tixraacayo nidaamka wareysiga, cilmi baarista iyo habeynta wareysiga ayaa sida caadiga ah go'aan ka gaari kara inaad isbedel ku sameysid oo aad u sameysid hababka soo socda. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee loogu diyaargaroobo soo-dhaweynta shaqaale-kicinta macmiilka waa in la daboolo waxtarkaaga su'aalaha waraysiga - xataa xitaa aan caadi ahayn.
Si lagaaga caawiyo inaad bilowdo, ITS oo lagu sifeeyay tiro badan oo sahan wareysi ah si loo helo codsiyada su'aalaha wareysiga ugu muhiimsan ee caadiga ah ayaa la waydiiyaa su'aalihii dambe ee wareysiyada. Sidan oo kale, marka aad fursad u haysato inaad la kulantid shaqaale firfircoon oo la soo kulmo, lafo ka hor muraayad ama weydiiso asxaabta ama qaraabada si aad u dhageysatid jawaabahaaga su'aalaha la socda si aad u diyaargarowdid inaad lugtaada caganta ugu dhigto hore.
Su'aalaha Inta badan Is-Weydiinta
Waa maxay tayadaada?
Maxay yihiin cilladahaaga?
Ma sax tahay in la sheego inaad ku safri doonto?
Maxaad u dooneysaa inaad ka shaqeyso [magaca magaca ururinta halkan]?
Maxaad jeclaan lahayd inaad ka tagto ururkaaga hadda?
Maxay ahayd sababta aad u shaqeysay oo u dhexaysay [taariikhda galabta] iyo [taariikhda qorista]?
Maxaad awood u yeelan laheyd inaad na siiso qof kale oo aan awoodin?
Xaggee ayaad ku aragtaa shanta sano? Toban sano?
Maxay yihiin saddexda agaasime ee hore ee aad rabto inaad sii wanaajiso?
Ma runbaa inaad guurto?
Ii baro waqtigii aad gashay qalad.
Waa maxay shaqadaada khiyaaliga ah?
Ii sheego ku saabsan guul gaadhka aad ku faraxsan tahay.
Maxay yihiin xanuunkaaga gaarka ah ee gaarka ah?
Maxaad rajeyn kartaa inaad ku dhameysato maalmaha 30 / 60 maalmood / 90 maalmaha shaqada?
Ka hadal resumeygaaga.
Kala hadal aasaaska waxbarashadaada.
Isku kalsoonow naftaada.
Ii sheeg sida aad u daryeeshay xaalad dhibaato leh.
Maxay noqon laheyd fikrad fiican inaga oo kugula socon karno?
Sidee ayaad u qaadi kartaa dabaysha booskan?
Miyaad shaqeyneysaa waqtiyada / dhammaadka toddobaadka?
Maxay yihiin baahiyahaaga magdhawga?
Maxaad raadineysaa shaqo kale?
Sii mudan marka aad si fiican u dhaaftay shuruudaha looga baahan yahay shirkad.
Maxay suurtagal tahay in warbixinnada degdegga ah ee kuugu dhow ee ku saabsan adiga kugu saabsan?
Waa maxay helitaankaaga?
Yaa nala wadaagaya?
Yaa kuu haya?
Maxay ahayd niyadjabkii ugu weynaa?
Waxaad iiga wargelisaa mudo aanad awoodin inaad ka hortagto maamulahaaga.
Waa maxay magaca CEOga?
Maxay yihiin ujeedooyinkaaga xirfadeed?
Sideed u maareyn lahayd miisaanka?
Maxay ahaayeen tayadaada / tayadaada kormeerahaaga?
Maxaad subaxda ku heshay?
Waa amaan inaad sheegto inaad tahay hage ama taageere?
Maxay ahayd buugii ugu dambeeyey ee aad kudoonaysay sababo gaar ah?
Fursadii aan kuugu yeeray kormeerahaaga waqtigan xaadirka ah waxaadna weydiisay waxa aag aad u xoojin kartid, maxa laga yaa odhan karaa?
Waa maxay goobta aad jeceshahay?
Maxaa kaa dhigi kara mid dhib badan?
Waa maxay hawlaha firaaqada?
Maxay yihiin qaar ka mid ah awoodahaaga?
Sidee baad u dabarci kartaa qof?
Miyaad shaqayn lahayd toddobada maalmood ee xNUMX +?
Sidee ayaad u maareyn kartaa macaamil careysi ah ama xanaaqsan?
Maxaad jeceshahay sida ugu badan uguna yar ee ku shaqaynta warshadan?
Su'aalahee ayaanan ku waydiin?
Waa maxay su'aalaha aad aniga ii hayso?
Su'aalahan waxaa badanaa la waydiiyaa inta lagu jiro wareysiga Shaqo, su'aalo badan oo aan la fileyn oo aan caadi ahayn ayaa sidoo kale laga codsan karaa.
Ha ilaawin inaad ka jawaabto Commnets in Maxay ahaayeen su'aalo kale oo caadi ah oo lagu weydiiyey inta waraysiga lagu jiro?